विश्व मजदुर वर्गको महान् श्रमिक दिवसको उपलक्ष्यमा ने.क.पा. (मसाल)ले मे दिवसका सहिदहरुप्रति श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्दै संसारका सम्पूर्ण मजदुर र नेपालका पनि शोषित, उत्पीडित र मेहनतकश जनतालाई अभिनन्दन गर्दछ । मजदुर वर्गको मुक्ति आन्दोलन एउटा अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलन हो र त्यसका लागि विश्वभरका मजदुर वर्ग र नेपालका पनि क्रान्तिकारी जनताको एक्यवद्धताको आवश्यकता पर्दछ । आज विश्व साम्राज्यवाद संसारभरको स्वतन्त्रता शान्ति र प्रगतिका लागि ठूलो बाधा बनेको छ । त्यसका विरुद्धको संघर्ष विश्व भरका र नेपालका पनि क्रान्तिकारी जनताको ऐतिहासिक दायित्व हो ।
समाजवादको स्थापना बिना शोषित, उत्पीडित र मेहनतकश जनताको मुक्ति सम्भव छैन र अन्तमा समाजवादको विश्व स्तरमा नै विजय हुनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ । आज मे दिवसको उपलक्ष्यमा हामीले विश्व समाजवादी क्रान्तिलाई सफल पार्नका लागि लगातार अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं । त्यही नै मे दिवसका सहिदहरु प्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जली हुनेछ ।
मे दिवसको उपलक्ष्यमा हाम्रो पार्टीले नेपालमा पनि आधारभूत रुपमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सफल पार्ने र तत्कालिक रुपमा गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्म निरपक्षतालाई सुदृढ पार्नका लागि तथा संघीयताका विरुद्ध लगातार संघर्ष अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ र त्यसका लागि सम्पूर्ण जनतास“ग ऐक्यवद्धताका लागि अपील गर्दछ ।
सरकारले पेश गरेको दोस्रो संविधान संशोधन विधेयकबारे संसदमा आज मतदान गर्ने ठेगान भएको थियो । तर सरकारले त्यो विषयलाई संसदको कार्यसूचीमा नै नराखिकन बैठक स्थगित गरी बैशाख २१ गतेलाई सारेको छ । वास्तवमा आफ्नो प्रस्तावको पक्षमा दुईतिहाई नपुग्ने कुरा स्पष्ट भएपछि नै सरकारले त्यस प्रकारको कार्यविधि अपनाएको हो । त्यसले सरकारको पराजयको मानसिकतालाई पनि बताउ“छ । सरकारको त्यस प्रकारको कार्य प्रणालीको ने.क.पा. (मसाल)ले कडा शब्दमा विरोध गर्दछ ।
प्रधानन्याधीश शुशिला कार्कीका विरुद्ध माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले दर्ता गराएको महाभियोग प्रस्तावलाई नेकपा (मसाल)ले गलत मान्दछ र विरोध गर्दछ । त्यो सत्ता पक्षको न्यायलयको स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण गर्ने र त्यसमाथि आफ्नो नियन्त्रण गर्ने षडयन्त्र हो । त्यसका साथै सरकारले आफ्ना अप्रजातान्त्रिक, असंवैधानिक, स्वेच्छाचारी र भ्रष्ट प्रकारका कार्यविधिलाई आ“च पुग्न नदिन तथा न्यायालयमाथि अंकुश लगाउन पनि प्रधानन्यायाधिश विरुद्ध त्यस प्रकारको महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउने निर्णय गरेको छ । सत्ता पक्षको त्यस प्रकारको भूमिकाको हाम्रो पार्टीले विरोध र भ्रत्र्सना गर्दछ र त्यो महाभियोगको प्रस्तावलाई पराजित गर्नुपर्ने आवश्यकता जोडदिन्छ ।
नेपालमा स्थित विभिन्न साम्राज्यवादी देशहरुका प्रतिनिधिहरुले नेपालका सबै पक्षहरुको सहमतिका आधारमा नै स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन् । त्यस प्रकारको सहमतिको अर्थ हो मधेशवादीसित सहमति कायम गर्नु र उनीहरुले अगाडि सारेका पृथकतावादी र राष्ट्रघाती प्रकारका मागहरुसित सहमति कायम गर्नु । भारतीय विस्तारवादले पनि नेपालप्रतिको आफ्नो विस्तारवादी उद्देश्यहरु पूरा गर्न मधेशवादीहरुसित सहमति कायम गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिंदै आएको छ । विभिन्न साम्राज्यवादी देशका प्रतिनिधिहरुले पनि त्यही प्रकारको नीतिको अनुशरण गरेका छन् । उनीहरुले संसारका विभिन्न देशहरुमा राष्ट्रिय विखण्डनको स्थितिको सृजना गर्दै आएका थुप्रै उदाहरणहरु छन् र नेपालमा पनि त्यही प्रकारको राष्ट्रिय विखण्डनको स्थिति सृजना गर्न चाहन्छन् । उनीहरुको संयुक्त विज्ञप्ति पनि त्यही उद्देश्यद्वारा निर्देशित छ र हामीले त्यस प्रकारको नीतिको कडा शब्दमा विरोध गर्दछौं ।
मिति ः– २०७४ बैशाख १७ गते